September 2019 – siifsiin
BAGA AYAANA IRREECHA ISIN GA’E!
Akka sawwi hin sochooneef Miila kaasee nama dhiitee hin miineef Balaa geessisee ofifiis akka hin abaaramneef Ofumaan of dararee, amaalasa isa gadheef (×2) Gadi'aamee elmaamuuf of dirqisisee Ofiis midhamee namas dararee, rakkisee Balleessa isaaf yakkaa innii uumee ballesse Gaafa gaadi'amee bare amaalasas dagaachisee Naman wal barsiisee, isas amaala tolchee Dhala lammaatas isa eggachuuf qalma isa … Continue reading Gaadii
Mee Ergaan Makmaaksa kunneni maali?
Sangaan biyya ofiitti bookkisu, biyya ormaatti ni mar’ata. “Oduuf na qalani” jette lukkuun. Cubbuun bishaanii harka buleen nama nyaachisa. Kan nyaatee fi kan kaate waa jalaa baha. "Maali fardi ni maraatee?" jedhe waraabessi hari’ee dadhabee. "Adeemsa abbaatu oftolchaa, fuula Waaqatu nama tolcha" jedhe Jaldeessi. Afaan gaariin afaa gaarii caala. Hafaasaarra afaansaa Namni dhadhaa afaan kaa’an … Continue reading Mee Ergaan Makmaaksa kunneni maali?
Bishaan ho’aan ,bishaan qoora caal daafe gara cabbitti jijjirama Meeshan baay’ee cimaan qaama namaa kan argamuu arraba keessatti. Gondaan sa’atii 12 keessatti kan boqottu daqiiqa saddet qofa. Qabiyyeen chokoleeti keessaa jiru saree ajjeesuu danda’a. Qillensa keessa keeti uukkamsitee qabuu dhanof-ajjeesu hin dandeessu. Ciqilee kee arraba keen tuquu hin dandeessu. Booyyeen gara samii ilaaluu hin danda’u … Continue reading Waantota dinqisiisoo!
September 18, 2019 September 19, 2019 Leave a comment
Kutaa 1 ffaa Shambal Abbabaa Biqilaa (Hagayya 7, 1932 – Onkoloolessa 25, 1973) atileetii Olompiikii maraatoonidhaan si'a lama mo'ee yoo ta'u irra caala kan ittiin addunyaarratti beekkamu bara 1960tti Olompiikii Gannaa luka duwwaa kaachudhaan medaaliyaa warqii argachuu isaatini. Yaadannoo Abbabaaf jecha istaadiyemiin Finfinnee jiru maqaa isaatin moggafameera. Abbabaa Biqilaa gaafa Hagayya 7, 1932 maatii Oromoo gosa Abbichuu ta'anirraa dhalate. Iddoon … Continue reading Abbabaa Biqilaa Eenyu? Kutaa 1 ffaa
via — siifsiin
Saba Oromoo biratti ganna keessa darbuun gara birraatti ce’uun hiika guddaa qaba. Yeroo gannaa fakkenya dukkanaa , hojiin baay’een kan itti baayyatu, keessattuu immoo qonnaan bultoonni kan baay’ee hojiin qaban yeroo kanatti. Haata’u malee yeroo rooba fi qorri sun darbee roobni cimaan sun hundi darbee, qorri akkas jabaatan sun hundi darbee yeroo miira namaa hawwatu … Continue reading Birraa!
Laga Awaash Laga Gibe Laga Baroo Laga Didessaa Laga Wabii Shabalee Laga Calalaq Laga Dabus Laga Muger Laga Omoo 10.Laga Aqaaqii Fi kanneen biroo lakkofne fixuu hin dandeenye heddu jiru. Kennaa uumaman badhaatuu kan taate dacheen Oromiyaa kenna ishee kunnunsuu fi haalan itti fayyadamanuun dhalootaf dabarsuun barbaachisaa dha. Maddi:- Internetii irraa,